ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်)
*Location – Shwe Mar Lar Yeikmon, Ka mar yut Township.
*Price – 1700 Lakhs
*Property Type — Apartment(GF)
*Area — 1200 sqft
*Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — Ceramic, 2-Bathrooms and ready to live located at Ka mar yut Township.
Property ID: S-1189520
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်)
Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်)
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate)
Yandanar Street (ရတနာလမ်း)
U Tun Lin Chan Street (ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း)
Butar Yone Street (ဘူတာရုံလမ်း)
Code-7546 ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Baho Road (ဗဟိုလမ်း)
Shwe Marlar Yeikmon (ရွှေမာလာရိပ်မွန်)
Shweproperty ID: S-1189520
Asking Price : 1,700 သိန်း